अविवाहित नायिका आँचल शर्माले किन गरिन विवाहित उदीप श्रेष्ठसंग विवाह ? – Online Nepal
March 15, 2020 4614
‘नाईं नभन्नू ल ४’ बाट नेपाली फिल्ममा भित्रिएकी अभिनेत्री आँचल शर्माले डेढ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेकी छन् । बिहीवार उनले प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । बुढानिलकण्ठस्थित होटल पार्क भिलेजमा हिन्दू परम्पराअनुसार आँचल र उदिपले विवाह गरेका हुन् ।
यसै हप्ता आँचलले चिकित्सक डा. उदिप श्रेष्ठसँग विवाह गरिन्, त्यो पनि करोडौं खर्च गरेर । फेसबुकमा विवाहको तस्बिरहरु हालिन् ।
आँचलले विवाह गरेका उदीप श्रेष्ठको दोस्रो विवाह हो । उनको यसअघि विदेशीसँग विवाह भएको थियो । उदिपसँग धनसम्पत्तिका कारण नजिकिएको फिल्मि बजारमा हल्ला छ। उदिप धनी परिवारका हुन् ।
चलचित्र क्षेत्रमा नाम हुने तर दाम कमै हुने भएकाले पनि नायिकाहरु पैसावाल पुरुषसँग विवाह गर्दै आएका छन् । चलचित्रबाट नाम कमाउने र त्यही नामबाट धनाढ्य पुरुष खोज्ने परिपाठी समेत विकास भएको छ । रिपोटर्सक्लब नेपालमा समाचार छ
Prevनेपालमा डेङ्गीको लक्षण देखा पर्याे, ३६ जनामा सङ्क्रमण
Nextकमेडीका जज सन्तोष पन्त भन्छन- ‘हिमेसको भोट १० लाखले बढी छ, कसरि खबपुले जित्छ ?’
आमा संग यस्तो सल्लाह गरेर हतारिदै ससुराली पुगेका अर्जुनले सोचे जस्तो भएन। आज यस्तो भयो भोलि के होला (हेर्नुहोस भिडियो)
रबि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल बाकसमा फालेको नानीलाई भेट्न गईन्। के बच्चा अरुलाई पाल्न दिन्छन् त ? (हेर्नुहोस भिडियो)